Otu esi achọta ma oru m choro ihe di nma?
N'oge na - adịghị anya, ndị nwe ụlọ ahịa nwere ike ikpebi ma hà ga - achọ enyemaka ọ bụla iji nọgide na - enwe njikọ ntanetị ma ọ bụ na ha nwere ike ịnagide onwe ha.
Ịghọta ihe dị mma maka azụmahịa gị nwere ike ịbụ ọrụ siri ike. Taa, Aga m agwa gị otu esi achọpụta ma SEO na-ahụ maka ọrụ dị mma maka azụmahịa gị. Ọzọkwa, M ga-ekpughere ihe omimi nke ịnweta àgwà onye nlekọta SEO. Mgbe ị gụsịrị isiokwu a, ọ ga-adịrị gị mfe ịme mkpebi nke ọma na nke ọma. Ntre, nso ikpere - pirelli p245/40r18.
Nchọpụta Ọchịchọ nke Organic: Achọrọ M Mkpa?
Mee ụfọdụ nchọpụta ahịa. Chee echiche banyere okwu ndị nwere ike ndị ahịa gị nwere ike ịbanye n'ime ụlọ ahịa Google ka ịchọta ebe nrụọrụ gị. Ị nwere ike na-ezo aka na ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka Google's Search Console na Moz ka ha nyochaa mkpụrụokwu okwu mkparịta ụka ndị nwere ike ịnweta ozi agbakwunyere na esi esi họrọ Keywords. Ọ bụrụ na ị chọpụta na ọ na-esiri gị ike ime nyocha ọchụchọ, mgbe ahụ SEO na-enyocha ọrụ dị ka Semalt bụ kpọmkwem ihe ị chọrọ. Ha ga-enye ndepụta nkebi ahịrịokwu zuru ezu maka ịchọta maka ika gị.
Lezienụ Anya na Ebe nrụọrụ weebụ Gị
Ọ bụrụ na ị chọpụta na e nwere ọtụtụ okwu okwu mkpokọta dị elu nke ndị ahịa nwere ike ịchọ ịchọta ala gị, nzọụkwụ ọzọ ga - ekpebi ma saịtị gị emeela ka akwadoro mgbasa ozi SEO. Ọ bụrụ na ee, ọ dị mma maka gị. Ọ bụrụ na ọ dịghị, ị ga - akwụkwu ụgwọ onye ọrụ SEO nke ga - eme nke ọma maka ntọala gị.
ndị ọkachamara SEO na-atụ aro na isiokwu nke ọ bụla ị ga-eche ihu nwere ike ịnweta peeji nke ọdịda ya. Cheta, ọ bụ ihe ọjọọ dị na isi okwu ọ bụla na ibe weebụ ọ bụla, karịsịa ma ọ bụrụ na isiokwu ndị ahụ anaghị egosipụta ihe ibe ahụ dị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-enye ngwá electronic, ị nwere ike ịmepụta ebe ị ga-esi zọpụta gị maka ụdị ụdị ngwaahịa ọ bụla ị na-eweta: laptọọpụ, ekwentị mkpanaaka, mbadamba, na eriri na-aga n'ihu.
Ngwá ọrụ na-arụ ọrụ dị oké mkpa n'ime mmeri nke mkpọsa SEO. Ọ bụrụ na ị na-etinye aka na onye ọrụ SEO dịka iwu na-eche na nke a ga-agụnye nyocha ọchụchọ, chee echiche ọzọ. Ịgba ọsọ ngwa ngwa, mkpado elu, nha foto, na mkpakọ faịlụ ga-emetụtakwa ihe si na mgbalị gị na njedebe nke mkpọsa SEO gị.
Mkparịta ụka Mmepe: Kpochapụ ya
N'ikpeazụ, tupu ị nweta onye ndụmọdụ SEO, ị ga-ahụ asọmpi maka mkpụrụokwu okwu nke ị ga-ahọrọ iji lekwasịrị anya. Echefukwala ilele ndị nwe obodo nke ihe onwunwe ndị na-ejide n'ọkwá dị elu ugbu a na nchọpụta anụ. Ọ bụrụ na saịtị ndị a niile nwere ndị nwe obodo karịa 80, ma ihe enyemaka gị ruru ebe dịka 25, okwu a nwere ike ịbụ ihe na-agaghị ekwe gị omume ịkwado.
Maka ndị ahụ na-achọta ya dị egwu iji kwalite weebụsaịtị ha na ịmepụta àgwà na-eduga, ịnye onye ndụmọdụ SEO ahụ dị mkpa aghaghị. Cheta, obere ego nwere ike ime ka ị nwee ọtụtụ puku mmadụ n'okporo ụzọ. Ya mere, gịnị mere na ị gaghị anwale ya?